Cubot X30 bụzi gọọmentị: igwefoto MP 48 na AI na 128 GB nchekwa | Gam akporosis
Ignacio Sala | | China gam akporo, Ngwa gam akporo
Cubot, ụlọ ọrụ nke nọworo na ahịa ruo ọtụtụ afọ, jisiri ike bụrụ ihe dị mkpa ọdịiche dị n'etiti ndị ọrụ na-achọ smartphones dị ọnụ ala, ma na-enweghị ịkwụsị uru nke kachasị elu nke anyị nwere ike ịchọta ugbu a n'ahịa.
Emeputa Cubot ka malitere ulo oru ohuru ohuru maka afo a na ahia. Anyị na-ekwu maka Cubot X30, ọnụahịa nke na-esoghị ụdị ahịa ahịa ọ bụla, mana ọ gara n'ihu ma mejuputa ya Igwefoto 5 nwere ọgụgụ isi.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ogo igwefoto Cubot X30, ọ dị mkpa iburu n'uche nke ahụ isi na-enye anyị mkpebi nke 48 MP ma Samsung rụpụtara ya. Igwefoto ndi ozo nke enyere onu ogugu a nwere 16 MPX modul di omimi, 5 MP macro lens, 2 MPX nke na-eme dika ihe omimi omimi na nke ikpeazu nke 0.3 MPX nke na-eme dika ìhè ihe mmetụta.
Igwefoto n'ihu dị mma maka selfies, ebe ọ na-enye anyị mkpebi nke 32 MP ma na-ejikọkwa usoro ịmeghe ihu. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ihuenyo ahụ, Cubot X30 jikọtara a 6,4 inch ihuenyo bụ Full HD + mkpebi (2.310 × 1080).
Iji jikwaa ngwaọrụ ahụ, Cubot adabere na Helio P60 nhazi site na MediaTek, 8 GHz 2.0-core processor arụpụtara na 12 nn. Batrị ahụ, otu ihe dị mkpa maka ọtụtụ ndị ọrụ, ruru 4.200 mAh, nke na-enye anyị ohere ịnụ ụtọ ngwaọrụ a ogologo oge na-enweghị nchegbu gbasara batrị ahụ.
Ọhụrụ Cubot X30 jikwaa gam akporo 10, ya mere, anyị ga-enwe ike ịnụ ụtọ ozi niile nke na-abịa na ụdị nke gam akporo a dịka ọnọdụ gbara ọchịchịrị, njikwa mmegharị ka mma, njikwa njikwa nzuzo ...
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka njikọta, Cubot X30 bụ Dakọtara na netwọk 4G / LTE, na-ejikọ Bluetooth 4.2, NFC chip na GPS. Ọ dị na agba ojii, acha anụnụ anụnụ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gradient na 128 na 256 GB nke ohere nchekwa.
Ọnụahịa nke ọnụ ọnụ a na-amalite site $ 149 maka ụdị 128GB nke nchekwa na $ 179 maka mbipute 256 GB na ga-adị site na July 27 na Aliexpress.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » China gam akporo » Cubot X30 bụzi ọrụ: igwefoto MP 48 na AI na 128 GB nke nchekwa
Mozilla's Firefox VPN Ugbu a dị na mpaghara na android
Etu esi agbalite ngwa mkpisiaka aka nke ekwentị Xiaomi gị